CAYAARAHA Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Cawl
Warshadda BONOVO iibinta tooska ah ee Haydarooliga 360 digriiga wareega wareega leh adeegga gadaal
Bonovo 360 Degree Rotary Hydraulic Grapple wuxuu ku shaqeyn karaa saacad ama dhinaca bidix, xawaaraha wareejinta waxaa xakamayn kara hawl wadeenka, marshooyinka gaarka ah ee loo yaqaan 'Rotary Rotars' ayaa loo isticmaalaa in lagu dheereeyo cimriga isla markaana la dhimo qiimaha, ku haboon dhamaan howlaha meesha looga baahan yahay xarag iyo rar, sida dhagax, alwaax, qashinka, howlaha tuubada, jardiinooyinka iyo dhagax dhigga mashaariicda.
BONOVO haydarooliga korontada ku shaqeeya ee nolosha dheer ee shaqada ku lifaaqan ganacsiga
Bonovo Hydraulic Unrotary Grapple qaabkeeda gaarka ah waxay u oggolaaneysaa dabacsanaanta ugu dambeysa iyo adeegsiga agagaaraha goobaha shaqada, dumin, beeraha ama mashruuc kasta oo u baahan saxnaanta barta soo qaadista barta.
BONOVO logo design carpple farsamo leh shahaadada ISO9001
Bonovo Mechanical Grapple waxay ku beddeli kartaa baaldiga baalayaasha, iyaga oo u beddelaya mashiinka ugu habboon ee lagu maareeyo waxyaabaha lumiya, kala-soocidda qashinka, iyo nadiifinta goobta duminta. moodooyin iyo cabbiro kala duwan ayaa la heli karaa si ay ula jaan qaadaan qotominta hawsha goobta ka socota.
BONOVO baaldi suulka tayo wanaagsan leh baaldi suul dhammaan cabbirrada
Ku darso farbarasho godkaaga suulka suulka codsiyada kala duwan ee wax ka qabashada sida diyaarinta goobta, dib u warshadeynta qashinka, duminta iyo codsiyada jarista.
Naqshadda Thumb Bucket oo ah naqshad guud oo caalami ah oo BONOVO ah waxay siisaa suul adag oo si fiican loo dhisay oo ku habboon dhammaan moodooyinka qodista. waxay si fiican ula shaqeysaa dhammaan lammaanayaasha degdegga ah, baaldiyo beddelaya & lifaaqyo kale ayay dabeyl ka dhigaysaa.